हिंसाको चपेटामा आधा आकाश | चितवन पोष्ट दैनिक
हिंसाको चपेटामा आधा आकाश
२०७२ बैशाख ६, आईतवार ०३:३७ गते
– भूमिश्वर शर्मा भावुक
यतिबेला नेपाली आमसञ्चार– माध्यमहरुमा पत्याउनै नसकिने खालका महिलाहरुमाथि हुने हिंसाका जघन्य अपराधहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । नेपाली समाज जतिजति शिक्षित बन्दै गएको छ, त्यतित्यति महिला हिंसाका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । अर्थात्, यतिबेला मुलुकमा महिला हिंसा निकै मौलाएको छ । प्रेमप्रस्ताव नस्वीकारिएको निहुँमा चेलीको अुनहारमा तेजाब खन्याइएको छ । दाइजो कम ल्याएको निहुँमा आफ्नै पति र परिवारद्वारा जिउँदै जलाइएको छ । आफ्नै बाबुद्वारा नाबालिका छोरीमाथि बलात्कार गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, एउटी असहाय नारीलाई बोक्सीको आरोपमा मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेर मानव मलमूत्र खुवाई जिउँदै जलाउनेसम्म अत्यन्तै अमानवीय निकृष्ट कार्यहरु यतिबेला हाम्रो समाजमा भैरहेका छन् । तेजाबले जलेको अनुहार, दाइजो नल्याएको निहुँमा जिउँदै सल्काइएको शरीर, आफ्नै बाबाको बलात्कारले विक्षिप्त भएकी बालिका र आजको आधुनिक युगमा पनि बोक्सीको आरोपमा जबर्जस्ती मलमूत्र खुवाइएकी असहाय नारीको पीडा कति होला ? यस्ता सहनै नसक्ने पीडाहरुले उनीहरुको भित्रभित्रै मन कति जलिरहेको होला ?
हो, वास्तवमै यतिबेला अधिराज्यभर महिला हिंसाका घटनाहरु दिन प्रतिदिन झन्भन्दा झन् बढ्दै गइरहेका छन् । अझ, अत्यन्तै भयावह र पीडादायी कुरा के छ भने जतिजति नेपाली समाज शिक्षित बन्दै गइरहेको छ, त्यतित्यति महिलामाथि हुने ह्रिंसाहरु बढिरहेका छन् । महिलाहरुमाथि हुने हिंसाहरुमध्ये बालबालिका एवम् महिलाहरुमाथि हुने बलात्कारका घटनाहरु हवात्तै बढेका छन् । एउटी पाँच वर्षीया बालिकाको बलात्कार भएको छ, त्यो पनि आफ्नै बाबुबाट । आफ्नै हजुरबाबाट समेत नातिनीहरु बलात्कृत भएका छन् । त्यतिमात्र होइन, शिक्षाको ज्योति ज्ञान बाँड्ने गुरूहरुबाट आफ्नै छात्रामाथि बलात्कार भएको छ । जनताको जीउज्यानको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने राज्य संयन्त्रबाटै चेलीको अस्मितासहित सर्वस्व लुटिएको छ । यस्ता पत्याउनै मुस्किल पर्ने जघन्य अपराधले हाम्रो सिंगो सभ्य समाजलाइ नै स्तब्ध र विक्षिप्त तुल्याएको छ । अहो ! यस्ता कल्पनासम्म गर्न नसकिने व्यवहार मानिसहरुबाट कसरी सम्भव भयो होला !
तीन महिनाअगाडि उग्रतारा–७ काभ्रेमा आठ वर्षीया बालिका सामूहिक बलात्कारपछि मारिइन् । यस्तै, छ महिनाअगाडि नेपालगन्जबाट मामाघर हिँडेकी किशोरी बसभित्रै सामूहिक बलात्कारमा परिन्, जसले अझैसम्म न्याय पाउन सकेकी छैनन् । त्यस्तै, गत फागुन २९ गते शुक्रबार झापाको पृथ्वीनगरमा ११ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भयो, त्यो पनि आफ्नै बुबाबाट । सोही दिन बिर्तामोड नयाँ बसपार्कमा १३ वर्षीया बालिका आफ्नै बाबुबाट बलात्कृत हुन पुगिन् । त्यस्तै, गत फागुन २४ गते बाराकी ६ वर्षीया चेलीको बलात्कारकै कारण मृत्यु भयो ।
यी माथिका घटनाहरुबाटै थाहा हुन्छ, महिला तथा बालबालिकामाथि कति यौन हिंसा हुन्छ वा भएको छ भनेर । यसलाई महिलामाथि हुने हिंसाका ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । केही समयपहिला नेपाल प्रहरीले जारी गरेको तथ्याङ्कअनुसार दैनिक दुई जनाभन्दा बढी बालबालिका एवम् महिलाहरु बलात्कृत हुन्छन् भनेर भनिएको छ । यस्ता जबर्जस्ती करणी एवम् महिलामाथि गरिने हिंसाको यथार्थ तथ्यांक खोज्नु मूर्खताजस्तै हुन्छ । किनकि, यस्ता घटनाहरु कमैमात्र सार्वजनिक
हुन्छन् । धेरैजसो इज्जतको डरले वा पीडकको धाकधम्कीका कारण एवम् अन्य विभिन्न कारणहरुले गर्दा पीडितहरु न्यायालयसम्म पुग्न सक्दैनन् र यस्ता घटनाहरुलाई प्रायः भित्रभित्रै गुपचुप पार्ने गरिन्छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाका अधिकांश घटनाहरुमा मागअनुसार दाइजो नल्याएको, छोरा जन्माउन नसकेको, प्रेमप्रस्ताव अस्वीकार गरेको, यौनसम्पर्कको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको, बोक्सीको आरोप आदि यस्तैयस्तै घरायसी र अन्धविश्वासजस्ता व्यक्तिगत कारण महिलाहरु जिउँदै जलाइएका घटनाहरु सार्वजनिक भैरहेका
छन् । नेपाली समाज जति शिक्षित हुँदै गएको छ, त्यतित्यति महिला हिंसाका जघन्य अपराधहरु किन बढ्दै गइरहेका छन् त ? यसैगरी महिला हिंसाका घटनाहरु किन बढ्दै गइरहेका छन् त ? यसैगरी महिला हिंसाका घटनाहरु बढ्दै जाने हो भने भोलिका दिनहरुमा नेपाली चेलीहरुको अवस्था के होला ? अनि, हाम्रो नेपाली समाजको सभ्य सभ्यता कहाँ पुग्ला ? मानिसहरुमा किन यसरी राक्षसीपनको विकास
भयो ? घरपरिवार, राज्य संयन्त्र, समाज आदि सबैतिरबाट नारीहरु हिंसामा पर्छन् भने कसरी सुरक्षित हुन्छन् उनीहरु ? यसरी महिला हिंसा मौलाउनुका कारणहरु के–के छन् त ? यस विषयमा गम्भीर भएर छलफल र बहस चलाउन जरूरी छ ।
महिलाहरुमाथि हुने हिंसा बढ्दै जानुको मुख्य कारण भनेको मुलुकमा मौलाउँदै गएको दण्डहीनताको अवस्था हो । अर्थात्, नेपालमा महिला हिंसाका विरूद्ध कानुन त बनाइएको छ, तर कानुनको कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो छ । राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरु संवेदनशील छैनन्, देशमा जताततै बलात्कारका घटनाहरु घटिरहेका छन्, नेपाली चेलीहरुलाई रातारात सीमाना कटाई बेचिएको छ, मुलुकमा महिला हिंसाले सीमा नाघेको छ । तर, जनतालाई सुरक्षा दिने जिम्मेवार एमालेका गृहमन्त्री वामदेव गौतम भन्छन्– संक्रमणकालीन अवस्थामा यस्ता घटना घटिरहनु सामान्य कुरो हो । यही एउटै अभिव्यक्तिबाटै प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ, महिला हिंसाका घटनाहरुमा राज्य कति संवेदनहीन छ भनेर । जनताका यस्ता सरोकारका विषय र मुलुकको शान्ति सुरक्षाको बिग्रँदो अवस्थाबारे राज्यले ध्यान नदिएको अवस्था छ । यसका कारण अधिकांश महिलामाथि हिंसा गर्ने अपराधीहरु या त पक्राउ नै पर्दैनन् या पक्राउ परिहाले पनि कम सजायमै उन्मुक्ति पाउँछन् ।
फितलो कानुन झन् फितलो कार्यान्वयनका कारण महिलामाथि हिंसा गर्ने अपराधीहरुको मनोबल बढेको छ । जबसम्म कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति पाइँदैन भनेर सुनिश्चित गर्न सकिँदैन, तबसम्म यो आपराधिक मनोवृत्ति रोक्न असम्भव छ । मुलुकमा भएको दण्डहीनताको अवस्थाका कारण नै महिला हिंसामा वृद्धि भएको तीतो यथार्थ हो । कमजोर राज्य, फितलो कानुन र भावशून्य भई मानिसहरुमा बढ्दै गएको राक्षसीपनका कारण झन्भन्दा झन् महिला हिंसा बढिरहेको छ ।
भनिन्छ, नारी सर्वत्र पूजनीय हुन्छन् तर यो भनाइ केवल भनाइमा मात्र सीमित छ । फितलो कानुन र झन् फितलो कार्यान्वयनले निश्चित रुपमा महिला हिंसा बढाएको छ । तर, योमात्र एउटा कारण होइन महिला हिंसा वृद्धि हुने । नेपाली समाजमा महिला र पुरूष समानताप्रति कमजोर सामाजिक चेतनाले हिंसाको घटना बढाएको छ । अहिले नेपाली समाजमा देखिएको महिला हिंसाको भयावह तथ्याङ्क र त्यसमा अझ बालिकाहरु बढी पीडित हुनुले के दर्शाउँछ भने हामीले जतिसुकै समानताका कुरा गरे पनि अझै पनि नेपाली समाजले महिलाहरुलाई इज्जतको व्यवहार गर्न सिकेको छैन । जबसम्म हामी समान हौँ भन्ने धारणाको विकास हुँदैन, तबसम्म महिला हिंसाका घटनाहरु बढिरहने छन् । भन्ने गरिन्छ, निर्धालाई थिचोमिचो गरिनु प्रकृतिको नियम हो । यदि महिला हिंसा अन्त्य गर्ने हो भने बोलीमा मात्र होइन, साँच्चीकै व्यवहारमा नै महिलाहरुलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा बराबरी हैसियतमा पु¥याउनु जरूरी छ ।
अन्त्यमा, बेलैमा राज्यले गम्भीर भएर यस विषयमा सोचोस् । महिलामाथि हुने हिंसाका विरूद्ध तत्काल कडाभन्दा कडा कानुन ल्याओस् र उक्त कानुनको पूरापूर कार्यान्वयन गरोस् । पीडितहरुले उचित न्याय पाउन कुनै पनि बहानामा अपराधीहरुले उन्मुक्ति नपाऊन् । अझै पनि नेपाली समाजमा महिलाको कुरा पुरूषले उठाउन त्यति उचित मानिँदैन । महिलाका लागि पुरूष पेसाकर्मी, अधिकारकर्मी अगाडि सरेको खासै देखिएको छैन । अब सबै जना आजैबाट एकजुट हौँ, महिला हिंसा रोक्नलाई । महिलामाथि हुने हिंसालाई रोक्नु राज्य, तपाईं हामी सबैको कर्तव्य हो ।